Ciidamo Maraykan ah oo ku dhintay weerar ka dhacay bariga Afqaanistaan. – Shabakadda Amiirnuur
Ciidamo Maraykan ah oo ku dhintay weerar ka dhacay bariga Afqaanistaan.
February 9, 2020 7:27 am by admin Views: 82
Wararka ka imaanaya wadanka Afganistaan ayaa tibaaxaya in toogasho ay ka dhacday mid kamid ah saldhigyada milliteri ee ciidamada Maraykanka kaga suganyihiin bariga wadanka Afqaanistaan oo ay ku duuleen 19 sano kahor.
Qof ku labisan dareeska ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa rasaas la dhacay ciidamo Maraykan ah oo ku sugnaa saldhiga milliteri ee gobolka Nangahaar bariga wadanka Afqaanistaan, halkaasna wuxuu ku diley askar Maraykan ah.
Inta haatan la xaqiijiyay ugu yaraan labo askari oo Maraykan ah ayaa ku dhintay rasaasta, halka ay ku dhaawacmeen lix kale, waxaana sidoo kale halkaas lagu dilay fuliyaha weerarka.
Dowladda Maraykanka oo war kasoo saartay weerarka ayaa xaqiijisay khasaaraha gaaray, waxaana ay sheegtay in weerarka uu ka dhacay gudaha saldhiga Nangahaar ee bariga Afqaanistaan.
“laba kamid ah ciidamadeena ayaa dhintay lix kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rasaas toos ah lagu weeraray xilli ay ku sugnaayeen gobolka Nangarhar ee bariga Afqaanistan” ayuu yiri Col. Sonny Leggett oo ah Afhayeenka ciidamada Mareykanka ee jooga Afqaanistaan.
Saraakiil katirsan xukuumadda Kaabul ayaa dhankooda sheegay in askariga weerarka geystay uu katirsnaa ciidamadooda, islamarkaana aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ku riixay askarta Maraykanka ee ay saldhiga wada joogeen.
Marar badan waxaa Afqaanistaan gaar ahaan saldhigyada ciidamada Maraykanka ka dhaca weeraro ay fulinayaan rag katirsan ciidamada xukuumadda Kaabul, kuwaas oo qaarkood markii hore ahaa rag katirsan Dhaalibaan oo isku soo daray ciidamada, halka qaarka kalana ay yihiin askar ka qiirootay dhibaatada Shisheeyuhu ka geysanayo Afqaanistaan.
Weerarkan, wuxuu sare u qaadayaa tirada ciidamada Maraykanka ee lagu dilay Afqaanistaan sanadkan cusub ee 2020–ka, waxaana muuqata in mar weliba oo uu Maraykanku sii joogo dalkaas ay ka dhigantahay ciidankiisa la’anaya oo kordha.